Washing Machine NA-FD16V1 - Panasonic
16kg NA-FD16V1 အထူး အစွန်းအထင်း ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းအတွက် အပေါ်မှ အဝတ်ထည့်ရသည့် အဝတ်လျှော်စက်
သင့်ကလေးများ သဘောကျသည့်အရာကို ကာကွယ်ရင်း သင် မလိုချင်သော အရာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Care+ Stain Expert သည် လျှော်ဖွပ်ရသည့် အဝတ်အမြောက်အများရှိသော လူများသည့် မိသားစုများအတွက်ပင် အဝတ်အစားများမှ အစွန်းအထင်းမှန်သမျှ အားလုံးကို တစ်နေရာမကျန် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဖယ်ရှားပေးသည်။
ရေအားပြင်းပြင်း ရိုက်ခတ်မှုဖြင့် အစွန်းအထင်းများ လွင့်ပြယ်စေနိုင်စွမ်း
*Compared toafull load washed by the Panasonic NA-F160A6 (internal testing)
အကောင်းဆုံး သန့်စင်၍ ရောဂါပိုးကင်းကင်း လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်း
Water Bazooka ၏ အားကောင်းသော ရေလည်အားသည် အဝတ်အထည်များထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး အစွန်းအထင်းများနှင့် လက်ကျန်ချေးချွတ်ဆေးများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ အဝတ်များအား လျှော်ဖွပ်သန့်စင်နေစဉ် ယင်းက အဝတ်အထည်များကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သန့်ရှင်းတောက်ပြောက်စေသည်။
လည်ပတ်မှု တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ပါဝါကို ကောင်းစွာပေးခြင်းဖြင့် Panasonic TD Inverter သည် ပိုမိုပြောင်စင်စွာ လျှော်ဖွပ်ဆေးကြောနိုင်ရန် ပါဝါ6ဆ ပိုမိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး စွမ်းအင်လည်း လျှောက်သုံးသည် - * စွမ်းအင် 40% အထိ သက်သာစေသည်။
* Panasonic NA-F160A6 တွင် အဝတ်အပြည့်ထည့်၍ လျှော်ဖွပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည် (ရုံးတွင်း စစ်ဆေးခြင်း)။
သင်၏ လျှော်ဖွပ်ရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် အကျိုးရှိရှိ ချွေတာသုံးစွဲပေးမည့် စွမ်းအင်
အရှိန်နှုန်းခြောက်ခုပါ လည်အားပို့လွှတ် ဂီယာအသစ်များဖြင့် TD Inverter သည် လည်ပတ်သည့် အပတ်ရေတစ်ကြိမ်စီတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး လည်နှုန်း သို့မဟုတ် စွမ်းအင်မျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
1. အဝတ်အထည်သန့်ရှင်းသော ရလဒ် - ပိုမိုအားကောင်းသော ရေစီးအား
2. ပိုမိုစွမ်းအင်ချွေတာပေးနိုင် - စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်း
3. အဝတ်အထည်များ ငြိ၍ ရှုပ်ထွေးမှု သိပ်မရှိခြင်း - လည်နှုန်းနိမ့်
4. အဝတ်စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး - အဝတ်စည်ပိုင်း အော်တိုသန့်ရှင်းရေး
အစွန်းအထင်းမျိုးစုံ ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးခြင်း
ဘယ်လိုမျိုး အစွန်းအထင်းပဲဖြစ်ပါစေ ဘယ်လိုနေရာမျိုးက ပေလာပါစေ အစွန်းအထင်းချွတ်ရန် ကြိုတင်ဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်ရမှုနှင့် လက်ဖြင့်လျှော်ဖွပ်ရသည့် အချိန်ကို အလွယ်တကူ ချွေတာလိုက်ပါ။ StainMaster+ သည် အကောင်းဆုံး ရေအပူချိန်တွင် တိုက်ချွတ်လျှော်ဖွပ်ပေးနိုင်စွမ်းဖြင့် အဝတ်အထည်များပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းမျိုးစုံကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပြီး မမြင်နိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးသည်။
* ဂျပန် အစားအသောက် သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည် / ဖြန့်ဖြူးမှု အမှတ်- 16033827001-0201,16033827001-0401
TD Inverter၊ အတောင် 8 ဖက်ပါဒီဇိုင်းဖြင့် Active Wave Pulsator တို့ကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အဝတ်လျှော်ရာတွင် အရှိန်ပြင်းပြင်း ဒေါင်လိုက် ရေစီးအားက တိုက်ချွတ်ပေးသည့် ရလဒ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ အဝတ်များကို တိုက်ချွတ်ရွေ့လျားမှုဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ လှုပ်ရှားပေးသောကြောင့် ချွတ်ရခက်သော အစွန်းအထင်းများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
ဘောင်မဲ့ မှန်ပြားအဖုံးပါရှိသည့် ရိုးရှင်းသော ထိန်းချုပ်အကန့် ဒီဇိုင်းကြောင့် သစ်ဆန်းခေတ်မီသည့်ပုံစံ ပေါက်ပါသည်။